ETHIOPIA AYAA KULMISAY MAANTA:
kadib markii ay dawladda ethiopia xiriirka saaxiibtinimo layeelatay maamulka baydhabo waxaa ka siraadmay colaad salka ku haysa kursi kalariixsasho oo dhexmartay hoggaankii gobolka ee isu ahaa taliyaha iyo kuxigeenka kuwaasoo lagu tilmaamijiray saraakiil aad isku jeclaa.
madaxwaynaha koonfur galbeed soomaaliya Gaashaanle sare Xassan Maxamed Nuur (shaati Guduud) ahna gudoomiyaha illaa haatan xisbiga layiraa (RRA) RAHANWAYN RESISTANCE ARMY ayaa maanta oo ay september ahayd 10.9.2002 kula kulmay dalka ethiopia sarkaal kamida kuwa ay aadka isaga soo horjeedaan.
malinimadii axaddii 07.09.02 ayaa col.shatiguduud loo dhaqaajiyay dhankaas iyo magaalada dooloow ee gobolka nagaylle dalka ethiopia si loo horfadhiisiyo ku xigeenkiisii hore oo ay haatan sida weyn isaga soo horjeedaan, bal si ay u dhimaan dhiigga walaalaha ee waayadanbaba qulqulaayay.
warar xogogaala oo aanu ka soo xiganay xarunta xisbiga ee RRA magaalada baydhabo ayaa xaqiijinaya in mr shaati guduud uu kulan layeeshay wafdi balaaran oo kasocda dhanka ETHIOPIA,
dhinaca ethiopia warka kasoo baxayana wuxuu kulankan ku tilmaaymayaa iskudaygii labaad ee lagunabadaynaayo xoogagga ku hardamaaya kursiga baydhabo waxyar uun ka hor inta aanu qabsoomin kulan waynaha loo qabanaayo soomaaliwayn ee dalka keenya lagu wado inuu dhowaan ka qabsoomo.baydhabo oo adduunku u yaqaanno ( the place of walking death)GOOBTII SOCODKA DHIMASHADA;magacaasoo baxay xiligii GENERAL CAYDIID iyaddo ay markaas dadku iyagoo socda ay naftu ka baxaysay gaajo daraadeed kii casheeyana ay isagoo socda xabad aan cinwaan lahayni nafta kala baxaysay.
mr aaden maddobe oo ah ninka ay is hayaan shaati guduud ayaa dhankaas iyo dooloow kasoo aaday magaalada uu fadhiisinka kuleeyahay ee diinsoor isagoo ay weheliyaan afar nin oo raggiisa ah.
waxaa wararku sheegayaan in kulankan maanta oo talaada ah dhacay la isku dayayo inay ku heshiiyaan inaanay wax colaada soo cusboonaysiinin dhimaanna dhaqdhaqaaqa ciidamada.
mr maxamed ibraahin xaabsade iyo aaden madoobe oo ahaa kuxigeenadii shaatiguduud waxay taliyahooda shaati guduud dagaal kaga saareen magaalada baydhabo 31 bishii july ee sanadkan dhiig badan oo sokeeye oo ay ku daadiyeen kadib.
warar hoos hoosana waxay farta ku fiiqayaan in labadanin ee xaabsade iyo madoobe ay doonayaan kadib iyadoo uu shaatiguduud sooceshaday baydhabadii ay horay uga saareen in ay dagaal kale ku sooceshadaan magala madaxda.
waxaa dadka u dhuundaloola xiriirka ethiopia iyo baydhabo carabka ku dhufanayaan inaanay kun jeer hadii ay ragani kulmaan wax heshiisa dhexmaraynin colaadana sidaa urimanaanayaan islamarkaana aysan marnaba isu samaynaynin wax isu tanaasulada.
ethiopia ayaa dhawrjeer ku celcelisay inay labada dhinacba saaxiib fiican latahay oo ay ka rajo qabto inay si dhaqso ah u dhamaynayso colaadda walaalaha dhextaalla.
SOMALITALK.COM | SEPTEMBER 10, 2002
XAGARYARE: Booliiska Jarmalka oo Heegan Galay
"Sool iyo Sanaag waa qayb kamida Puntland"
Sidaas waxaa yiri sarkaal sare oo katirsan DGPL oo u waramayey saxaafadda GUJI... 2/9